भोक लागेको बेला खाना खान नदिएपछि फोटोग्राफरले बिहेको सबै फोटो बेहुलाकै अगाडि डि’लेट गरे ! – Tufan Media News
भोक लागेको बेला खाना खान नदिएपछि फोटोग्राफरले बिहेको सबै फोटो बेहुलाकै अगाडि डि’लेट गरे !
१७ आश्विन २०७८, आईतवार १०:५२
काठमान्डौ : एकजना फोटोग्राफर बिहे समारोहमा फोटोसुटका लागि गएको थिए। तर त्यहाँ यस्तो घटनाक्रम बिनदियो फोटोग्राफरले बिहेको सबै फोटो बेहुलाकै अगाडि डिलेट गरिदिए। बेहुलाले देखाएको धु’र्त व्यवहारका कारण रिसको झोँक मा आएर फोटोग्राफरले बिहे समारोहका सबै तस्वीर ठाउँकाठाउँ डिलिट गरिदिए र घरतिर लागे। टाइम्स नाउ न्युजका अनुसार ती फोटोग्राफरले सोसल मिडिया साइट रेडिटमा यो घटना र आफूले त्यस्तो कदम उठाउनु पर्नाको कारणबारे लेखेका छन्।
घण्टौं लगाएर भोकभोकै काम गर्दासमेत खाना खान नदिएपछि उनी रिसाएका हुन्। उनले खाना खानलाई २० मिनेट समय माग्दा बेहुलाले फोटो खिच्ने काम जारी राख्नू नभए पैसा नदिए बताएका थिए। त्यसपछि फोटोग्राफरले पनि आफूले खिचेका सबै तस्बिर तथा भिडियोहरु डिलिट गरिदिए। वास्तवमा ती व्यक्ति पेशेवर फोटोग्राफर थिएनन्। उनले कुकुरको हेरचाह गर्ने काम गर्छन्। साथीले निकै कर गरेपछि उनी साथीको बिहेमा फोटो खिचिदिन गएका थिए।
२५० डलर रकम ज्यालामा बिहेको फोटो खिच्ने कामका लागि उनीसँग सम्झौता भएको रहेछ। त्यस अनुसार बिहेको दिन बिहान ११ बजेदेखि उनको काम सुरु भयो जुन रातको ८ बजेसम्म चल्नेवाला थियो त्यस बीचमा बेलुकी पाँच बजे तिर पाहुनाहरूले खाना खान थाले। तर फोटोग्राफरका लागि भने खानाको ब’न्दोबस्त नै थिएन। उनलाई खाना नखाइकनै लगातार फोटो खि’चिरहन भनियो।
भोको पेटमा दिनभर काम गरिरहँदा था’केर ग’लेपछि उनले आराम तथा खानपिनका लागि २० मिनेटको समय दिन बेहुलासँग आग्रह गरे । तर उनको आफ्नै साथीसमेत रहेका ती बेहुलाले भने लगातार फोटो नखि’चेमा सम्झौता बमोजिको अढाइ सय डलर रकम नदिने भन्दै खाना खाने समय नदिने जवाफ दिए। भोक, थकान र गर्मीका कारण ल’खतरान परेका फोटोग्राफर बेहुलाको जवाफले आगो भए। उनले तत्कालै बेहुलाका अगाडि क्यामेराका सबै तस्वीर डि’लिट गरिदिए। बेहुलाले दुई शब्द बोल्न नपाउँदै फो’टोग्राफर त्यहाँबाट हिँडिहाले।
बिजुलीकाे महसुल घट्यो, विपन्न